ပညာရေးမဆိုလယ်ပြင်၌အောင်မြင်မှုရရှိရန်လိုအပ်နေသည်။ ပြည်သူ့အထဲတွင်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မိမိတို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ဖို့အသုံးပြုကြသူဆရာ, ဆရာမများ, တက်ကြွစွာပါကအသုံးပြုပါ။ အလုပ်အကိုင်အထိန်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိပညာအပြင်အခြေခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလိုအပ်သည်။ ဒါဟာအထိန်းတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။
ကျူရှင် - ကဘာလဲ?
အဆိုပါစကားလုံးမှာလက်တင်နည်းပြဆရာ« repetitor »ထံမှလာ - "။ အောက်ပါအတိုင်းသောသူ" အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသော ဒီအလုပ်အကိုင်များ၏လူအပေါင်းတို့သည်စည်းကမ်းအတွက်ပုဂ္ဂလိကသင်ခန်းစာများပေးသည်:
အတန်းလူတစ်ဦးအတွက်သို့မဟုတ်အဝေးမှ (အွန်လိုင်း), တစ်ဦးချင်းအုပ်စုများသို့မဟုတ်ကျင်းပကြသည်။ ကျူရှင် - တစ်အမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်, စျေးကြီး, ယနေ့ဝယ်လိုအားကြီးလှ၏။ မကြာခဏ (သို့သော်မပေးအမြဲ) ဝင်ပေါက်စာမေးပွဲ, ကျောင်းသားများနှင့်တစ်ဦးအခြို့သောဘာသာရပ်အတွက်အစီအစဉ်ကိုကျွမ်းကျင်မနိုင်သူကျောင်းသားများကာလအတွင်းအပိုသင်ခန်းစာများကိုလျှောက်ထားပေးသည်သူတစ်ဦးဆရာရှာဖွေနေ။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်စာမေးပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ဆရာရဲ့အကူအညီနဲ့များအတွက်ဝယ်လိုအား။
ပုဂ္ဂလိကသင်ခန်းစာများ Give - တစ်ရှုပ်ထွေးပြီးတောင်းဆိုနေတာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အလားအလာဆရာများစိတ်ဝင်စားသောအဓိကဆိုတဲ့မေးခွန်းကို: ကကျူရှင်အပေါ်ငွေရှာဖို့ဖြစ်နိုင်မလား? ဒီစျေးကွက်အတွက်စာရင်းအင်းအောက်ပါ says:
2015-2016 GG တွင်။ မော်စကိုနှင့် St. ပီတာစဘတ်အတွက်နည်းပြ၏ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ် - 900-1200 စ။ ယင်းဒေသများတွင် - 550 ရူဘယ်ရန်။
သငျသညျအနည်းဆုံး 10 ပုဂ္ဂလိကသင်ခန်းစာများတိုင်း 500 ရူဘယ်များအတွက်တစ်လနှင့်တာဝန်ခံပေးလျှင်တိုတောင်းခုနှစ်တွင်, 20 000 ရူဘယ်၏ဘတ်ဂျက် replenish ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအသင်ဤအလုပ်အခြေခံကျင့်ကိုကျင့်လျှင် - နှစ်ခုမှသုံးဆပိုလာပြီ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့လုံးကိုတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိနားလည်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းစီးပွားရေးအစီအစဉ်ရှိခြင်း, ကျူရှင်အပေါ်ငွေရှာဖို့ဘယ်လိုသိရန်။ ဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ - Any အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်လိုအပ်သည်။
မအသစ်အဆန်း - ပုဂ္ဂလိကသင်ကြားမှုဝန်ခံဈေးကွက်ထဲမှာ။ ရုံကျူရှင်ဘယ်လိုစတင်သလဲထွက်ရှာဖွေနေကြသည်သူများသည်က "အတွေ့အကြုံရှိတဲ့" အလုပျသမားများထံမှအကြံဉာဏ်နှင့်အကြံပေးချက်များအများကြီးရနိုင်တယ်။ ပထမဦးဆုံးအဆင့်မှာကရန်အရေးကြီးပါသည်:
အလုပ်အကိုင်အရပျကိုဆုံးဖြတ်ရန် - အွန်လိုင်းတစ်ဦးငှားရမ်းခန်းထဲမှာအိမ်မှာကျောင်းသားတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆရာ;
; ကား, အထူးက်ဘ်ဆိုက်ဖန်တီးသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာ - အလုပ်ဥပဒေရေးရာခဲ့ကြောင်းဂရုစိုက်
တရားဝင်အလုပ်လုပ်ရသည် Self-အလုပ်နိုင်ငံသားလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားယင်းသည်, IP ကိုဆွဲလျက်, အခွန်စနစ်ကရှေးခယျြသငျ့ပါ: 6% ၏ရိုးရှင်းလွယ်ကူတာ (STS) သို့မဟုတ်မူပိုင်။ ဒုတိယကပိုစျေးကြီးသည် - 18 000 ရူဘယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, 2017-18 နှစ်များတွင်ကိုယ်ပိုင်ဆရာများလှုပ်ရှားမှုဟာသူတို့ရဲ့မျိုးများအတွက်နှစ်စဉ်အခွန်လုံးဝဖျက်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျူရှင်များအတွက်မူပိုင်ခွင့်ကိုယခုနှစ်မကုန်မီလမဆိုအရေအတွက်ကအနည်းဆုံးဝယ်ယူခြင်းနှင့်ဆရာမဖို့အများကြီးအခွင့်အလမ်းများဖွင့်ဖွင့်လှစ်:
ဆရာမက၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှု - သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဝယ်လိုအားအောင်မြင်ရန်နှင့်ကျူရှင်အဘို့အကျောင်းသားများကိုကိုရှာဖွေ။ "လုပ်ငန်းရှင်တွေ" လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေ, အတွေ့အကြုံ, ပညာရေး၏ရရှိမှုကိုသတ်မှတ်သည့်ကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ရှိသည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်အတူစတင်။ သငျသညျအငျတာနကျန်ဆောင်မှုများ၏အစု၏အခြေခံပေါ်မှာကြော်ငြာနိုင်ပါတယ်။ ဆရာကြားခံမရှိဘဲဖောက်သည်ရှာနေနှင့် On-demand သည်အဘယ်မှာရှိသူတို့ကစီစဉ်တဲ့သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း deducts သောအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ရှာရန်ကျောင်းသားများကိုကျုရှင်တခါမှာအတော်ကြာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်နေရာတစ်နေရာယူနိုင်ပါတယ်။ စတင်, သင်အောက်ပါမျက်နှာပြင်ကိုစဉ်းစားနိုင်သည်
Rrofi.ru - လူကြိုက်အများဆုံးထဲကတစ်ခု, ဒါပေမယ့်ကံမကောင်း, paid အခြေစိုက်စခန်းများကျူရှင်။
Repetitor4you.ru - ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအခမဲ့က်ဘ်ဆိုက်။
"သင်၏ဆရာ" - ပေါ်တယ်, ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်မရှင်ယူပြီး။
"Avito" နှင့် "လက်" - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာစောင်ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်နိုင်သောဝန်ပို။
ဝေးလံခေါင်သီကျူရှင် - တစ်ဦးချင်းစီသင်ကြားခြင်း၏အကိုင်းအခက်တစ်ခုမှာ။ တကယ်တော့သူကနေတဆင့်သင်ခန်းစာများပေးသောဝေးကွာသောအလုပ်ဖြစ်ပါသည် အင်တာနက် Skype, video call တစ်ခု, e-mail, မှတစ်ဆင့်: ။ လုပ်ငန်းများသို့မဟုတ် In-line ကို mode ကိုအဝေးမှဖျော်ဖြေကြသည်, သင်ကွန်ပျူတာနှင့်တက်ဘလက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဓိကအခွအေနေ - သင်တန်းနှင့်ပေါ်မှာအရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုနှင့်အသံများအတွက် gadget က၏ရှေ့မှောက်တွင်။ အတော်များများကပုဂ္ဂလိကကုန်သည်တွေတမင်တကာသူတို့၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်အွန်လိုင်းကိုသွားပါ။ ဤသည်အများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်, နှစ်ဖက်စလုံးအကျိုးရှိသည်:
ဒါဟာ (တိုင်းပြည်အတွင်းအားလပ်ရက်အပေါ်) မဆိုအရပျ၌သှနျသငျလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်နိုင်ပါတယ်;
ဝေးလံခေါင်သီ session တစ်ခု (Full-အချိန်) သွားရောက်ခြင်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အောင်မြင်ဖို့ကျူရှင်န်ဆောင်မှုများကိုရိုးရှင်းစွာအလုံအလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ မည်သည့်အလုပ်အကိုင်လိုပဲ, ကကတိကဝတ်, ဇွဲနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။ တစ်ဦးကောင်းဂုဏ်သတင်းဝင်ငွေစေရန်, သငျသညျဤအကြံပြုချက်များကိုသုံးနိုင်သည်:
တစ်ဦးချင်းစီကို client မှတစ်ဦးချင်းချဉ်းကပ်ကျင့်သုံးပါ။
ကျူရှင်နှင့် ပတ်သက်. စာအုပ်များ
အထိန်းတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ဆုံးဖြတ်သူများသည်အထူး edition မှာ, စံစက္ကူနှင့်နမူနာအီလက်ထရောနစ်ဗားရှင်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကသင်ကြားမှုပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်သည့်အခါသူတို့ထဲကအများစုဟာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ အဆိုပါဝန်ခံအခြေခံနှင့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်ဆရာများ, ထင်မြင်ချက်ဆောင်းပါးများ, လဲ tutorial နှင့်အထိန်းတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုစာအုပ်တွေများအတွက်လက်စွဲကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။ အဆုံးစွန်သောပါဝင်သည်:
"ကျနော့်အလုပ်အကိုင် - နည်းပြဆရာ" 2009 ခုနှစ်က Universal primer ဆရာ, ဆရာမ။
"ဟုအဆိုပါဆရာများ၏ကျွမ်းကျင်မှု" 2010 ခုနှစ်ရှေ့နေများနည်းလမ်းများနှင့် Doug Lemonova ထံမှနည်းစနစ်။
အမေရိကန် Lee က LeFever ၏အောင်မြင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက် - 2013 "အနုပညာရှင်းပြခဲ့သည်" ။
အတွေ့အကြုံ 15 နှစ်နှင့်အတူ "သင်ကြားမှုများ၏အနုပညာ" 2012 ခုနှစ်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိဆရာဂျူလီ Dirksen ထိရောက်သောနှင့်မှိုင်းမဟုတ်မဩဝါဒပေးအောင်ဘယ်လိုသူ၏နောက်လိုက်ပြောပြသည်။
"နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများသင်ကြားနည်းလမ်းများ" ဆိုတဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်၏ 2008 ခုနှစ်တစ်ဦးကရွေးချယ်ရေး - အခြေခံသင်တန်းနှင့်အလေ့အကျင့်ကို manual EV ဆရာ, ဆရာမများအတွက် Solovova ။
Oligopoly - ထိုလက်ဝါးကြီးအုပ်နှင့်များ၏အကြောင်းတရားများနဲ့မတူပဲ
လသာဆောင်ဘောင် sheathe ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ခရစ္စမတ်ဖြတ်ညှပ်ကပ်အယ်လ်ဘမ် - လှလှပပအလှဆင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူး